Haweeneyn Muqdisho ku dishay gabar ay dhashay (Sabab?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Fal naadir ah oo laga naxo ayaa maanta ka dhacay xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Halkaas waxaa haweeney ku dishay gabar ay dhashay oo laheyd uur iyo 3 caruur ah.
Dadka xaafadda Jamhuuriya ayaa warbaahinta u sheegay in dilkaani dhacay kadib markii gabarta la dilay ay ku noqotay nin horay looga furay.
“Gabarta la dilay waxaa hooyadeed ka furtay nin qabay, kadib ayay ninkii ku noqotay, waxaana looga yeeray guriga qoyskeeda, markii ay timidna baangad iyo faasas ayaa lagu garaacay, waana geeriyootay” ayay haweeney Jamhuuriya degan u sheegtay warbaahinta maxaliga ah ee Muqdisho.
Haweeneyda goobjooga aheyd ayaa sheegtay in ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya ay yimaadeen guriga, islamarkaana meydka gabartaas u qaadeen Isbitaalka Keesaney si loo baaro.
Guddoomiyaha Degmada Kaaraan, Axmed Yalaxoow ayaa xaqiijiyay in falka uu ka dhacay Xaafada Jamhuuriya ee Degmada Kaaraan.
Wuxuu sheegay in Hooyada gabadhaan dhashay ay ka canaananaysay gabadheeda nin gabadha qabay oo saddex mar ay kala tageen.
“Hooyadu gabadha wey canaananeysay oo ma dooneyn in disho, laakiin waxey maamadu ka xumaatay in gabadheedu ku laabato nin saddex jeer furay” ayuu yiri Axmed Xasan Yalaxow.
Ciidamada Booliiska ayaa gacanta ku dhigay Hooyada waxaana lagu haayaa Saldhiga Booliiska Kaaraan.
Falkaan ayaa naxdin ku noqday dadka ku nool xaafadda Jamhuuriya, waxaana xaafadda deriska ah la ah xaafadaas ee Arjanatiin bil ka hor ka dhacay dil gowrac nin oday wiil arday ah ugu geystay gudaha Masjid.